Camaliyad Istish-haadiyo Ah Oo Lagu Laayay Askarta Bangarafta. – Calamada.com
Camaliyad Istish-haadiyo Ah Oo Lagu Laayay Askarta Bangarafta.
calamada May 22, 2018 1 min read
Camaliyaddan Istish-haadiyada ah waxey ka dhacday Kontoroolka Baar Ismaaciil ee degmada Afgooye,waxaa Camaliyaddan lala beegsaday kolanyo ka tirsan ciidamada Murtadiinta Bangarafta ee Mareykanka tababaray.
Kolanyadan Camaliyadda Istish-haadiyada ah lala beegsaday ayaa kasoo baxay saldhiga Mareykanka uu ka dhex samaeystay garoonka diyaaradaha Bilidoogle ee gobalka Shabeelada hoose waxeyna ku sii jeedeen magaalada Caasimadda ah ee Muqdisho.
Idaacada Islaamiga ah ee Andalus ayaa baahisay in Camaliyadda Istish-haadiga ah uu fuliyay Halyey ka tirsan Katiibada Istish-haadiyiinta ee Xarakada Mujaahidiinta Alshabaab.
Andalus ayaa intaasi ku dartay in Weerarkan Naf hurnimada ah lagu gubay Labo gaari oo Cabdi bile ah mid saddex-aadne waxyeelo xoogan la gaarsiiyay,sidoo kalane Camaliyaddan lagu dilay inka badan Labo iyo Toban askari oo Bangarafta ah tiro intaa ka badane lagu dhaawacay.
Previous: Halkan Ka Dhageyso Warka Duhurnimo 06-Ramadaan-1439 Hijri.
Next: Halkan Ka Dhageyso Barnaamijka Caalamulyowm 06-09-1439 Hijri.